Vitamin E 700 SF Powder, D-Alpha-Tocopheryl acetate, lesilicon dayokhsayidi eninzi njengoko yenethiwekhi 700 IU Vitamin E / g - China Toption Industry
Vitamin E 700 SF Powder, D-Alpha-Tocopheryl acetate, lesilicon dayokhsayidi eninzi njengoko yenethiwekhi 700 IU Vitamin E / g
【Isicelo】 Vitamin E 700 SF Powder tablet ephantsi-umxholo kunye njengezingxobo nzima-iqokobhe.
【Producer Main】 DSM, ADM, Zhejiang Medicine (ZMC), Brenntag
【Uhlobo】: Powder, abandayo esasazekayo amanzi, lesilicon dayokhsayidi eninzi njengoko yenethiwekhi 700 IU Vitamin E / g
【Compendia】: FCC *; USP *; .. Ph Eur *; IP; Non-GMO; PAH low
Ulwazi olunzulu on E Vitamin kwimarike kusenza sikwazi ukufumana kuwe kukhuphiswano ixabiso ex owaziwayo Vitamin E abenzi. Ukuba ukhangela Vitamin E 700 CWS-A Powder , musa ukuthandabuza imeyili kuthi.
Vitamin E inemisebenzi emininzi kwaye ebalulekileyo;
Nceda ukugcina isakhiwo iseli ngokukhusela ingaphandle cell.
yinto antioxidant kunceda isantya iinkqubo esonzakalisa iiseli
Iinzuzo zempilo ukusuka vitamin E:
Nceda ukunqanda izifo iimpahla intliziyo negazi
esetyenziselwa okuthintela umhlaza
Nceda ukunciphisa uxinzelelo oluphezulu lwegazi
kusetyenziswa ukunqanda izifo ezithile isikhumba
Nceda nge Arthritis
Product Ukucaciswa Package Izicelo Main
DL-Alpha tocopherol acetate 93% Oil 200 / 950kg / igubu Ngokuba ukusetyenziswa kwibakala feed.
DL-Alpha tocopherol acetate 98% Oil 20/50 / 200kg / igubu Kuba inqaba of imajarini, i-oyile kunye namanqatha, iimveliso isondlo nokutya baby, nokufuya capsule ethambileyo.
DL-Alpha tocopherol acetate umgubo 50% CWS /
CWS-D 20kg / ibhokisi Lula esasazekayo emanzini abandayo yaye ke ngoko inokusetyenziswa zokuzifaka apha iimveliso zokutya owomileyo ezifana umgubo, ubisi olungumgubo, yesiselo umgubo.
DL-Alpha tocopherol acetate amandla 50% TAB 50kg / ibhokisi Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni kunye njengezingxobo nzima.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 50% TAB-B 20 / 50kg / ibhokisi Ukuze isetyenziswe njengezingxobo nzima.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 75% TAB-B 20 / 50kg / ibhokisi Ukuze isetyenziswe njengezingxobo nzima.
Vitamin E (Mixed tocopherols) 30% / 50% Powder 25kg / bag Kusetyenziswa ukutya okanye kwibakala feed, ubukhulu becala kusetyenziswa kwizilwanyana kwalusa.
DL-Alpha tocopherol acetate umgubo 50% SF 25kg / ibhokisi Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni Umxholo eliphantsi kunye njengezingxobo nzima.
DL-Alpha tocopherol calcium succinate 96% crystalline Powder 25kg / ibhokisi Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni kunye njengezingxobo nzima.
Mixed tocopherol mmandla 50/70/90% Oil 20/50 / 200kg / igubu Kusetyenziswa i antioxidant ioli etyebile, Qhotsa eyaneleyo okunamafutha acid.
D-Alpha tocopherol 1000/1100/1200/1300 / 1409IU 20/50 / 200kg / igubu Kuba inqaba of imajarini, i-oyile kunye namanqatha, iimveliso isondlo nokutya baby, nayo asetyenziswe capsule ethambileyo kwaye ibe antioxidant ioli namanqatha.
D-Alpha tocopherol acetate 1000/1100/1200 / 1360IU 20/50 / 200kg / igubu Kuba inqaba of imajarini, i-oyile kunye namanqatha, iimveliso isondlo nokutya baby, nayo asetyenziswe capsule ethambileyo kwaye ibe antioxidant ioli namanqatha.
D-Alpha tocopherol acetate umgubo 700 CWS 20kg / ibhokisi Lula esasazekayo emanzini abandayo yaye ke ngoko inokusetyenziswa zokuzifaka apha iimveliso zokutya owomileyo ezifana umgubo, ubisi olungumgubo, yesiselo umgubo.
D-Alpha tocopherol acetate umgubo 700 TAB 20kg / ibhokisi 50kg / igubu Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni kunye njengezingxobo nzima.
D-Alpha tocopherol acetate umgubo 700 SF 25kg / ibhokisi Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni Umxholo eliphantsi kunye njengezingxobo nzima.
D-Alpha tocopherol acetate beadlet 700 TAB-B 20kg / ibhokisi 50kg / igubu Ukuze isetyenziswe njengezingxobo nzima.
D- Alpha tocopherol acetate beadlet 950 TAB-B 20kg / ibhokisi 50kg / igubu Ukuze isetyenziswe njengezingxobo nzima.
D-Alpha tocopherol succinate 1210/1185/1185-se 25kg / imigqomo Ngokuba ukusetyenziswa emacwecweni kunye njengezingxobo nzima.
Water enyibilikayo (Natural) Vitamin E (TPGS) 25kg / igubu 10kg / ibhokisi Kuba inqaba edliwayo, nangento eselwayo, ingakumbi ukutya kunye yimbonakalo ngaphaya, nokufuya capsule ethambileyo.
: Previous Vitamin E 700 CWS-A Powder, D-Alpha-Tocopheryl acetate, esasazekayo amanzi abandayo 700 IU
Next: Vitamin E 700 TAB Powder, D-Alpha-Tocopheryl acetate, grade tablet 700 IU Vitamin E / g
DL-Alpha Tocopherol Oli
Vitamin E 700 CWS Powder, D-Alpha-Tocopheryl Mseb ...
Vitamin E D-Alpha-Tocopheryl acetate 1100IU Ulwelo